2012 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 11:57 PM | No မှတ်ချက် |
by Myanmar Journal on Monday, December 31, 2012 at 7:38pm ·
ရန်ကုန်မြို့ မြို့မကွင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် အများပြည်သူများ ပါဝင်တဲ့ ၂၀၁၃ နှစ်သစ်ကူးကြိုဆိုပွဲမြင်ကွင်း ( ဇန်နဝါရီ ၁ရက် ၊ ၂၀၁၃။)
မြန်မာနိုင်ငံ အများပြည်သူပါဝင်နိုင်မဲ့ နှစ်သစ်ကူး ကြိုဆိုပွဲတခုကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလိုပဲ လူအများပါဝင်နိုင်တဲ့ နှစ်သစ်ကူး ကြိုဆိုပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင် မိတ်ဆက်တာဖြစ်တယ်လို့ ပွဲစီစဉ်တဲ့ တာဝန်ရှိသူ တယောက်က ပြောပါတယ်၊
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone request)
Posted by zar ni (My Way!) on December 31, 2012 at 17:03 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီသင်ခန်းစာကတော့ ဧည့်သည်မှ အခန်းဝန်ဆောင်မှုအား တယ်လီဖုန်းဖြင့်မှာကြားလာပါက ပြန်လည်ဖြေကြားပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Unit 1,3နဲ့4တွေနဲ့ ပြန်ဆက်စပ်လေ့လာကြည့်ပါ။
Unit 17 Taking Telephone Request
Room service. Can I help you?
Staff: Room service. Can I help you?
Guest: Hello, could I haveabottle of champagne please?
Staff: Certainly, what room number please?
Guest: Room 352.
တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုဆီသို့ တွန်းပို့နေသော မြ၀တီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်
Author: lubo601 | 9:47 PM | No မှတ်ချက် |
မြ၀တီ- မဲဆောက် နယ်စပ်တွင် တရားဝင်ကုန်သွယ်မှုပြုသည့် ကုန်ဝင်/ ထွက်ပေါက် လမ်းကြောင်း အဖြစ် ချစ်ကြည်ရေးတံတား တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သော်လည်း ချစ်ကြည်ရေးတံတား၏ ၀ဲယာ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းနဖူး၌ ဂိတ်စခန်းပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်မှ တရားမ၀င် ကုန်သွယ်မှုပြုနေသည့် ကုန်ဝင်/ ထွက် ပေါက် လမ်းကြောင်းများအဖြစ် သက်ဝင်လှုပ်ရှားတည် ရှိနေ ကြောင်း တာဝန်ရှိအာဏာပိုင်အစဉ်အဆက်မှ လက်ခံသိရှိထားပါသည်။
by Wai Maw on Monday, December 31, 2012 at 9:18pm
မြန်မာပြည်မှ ပြန်လာသော မိတ်ဆွေတဦးက ကျနော်ဖတ်ဖို့ စာအုပ်တအုပ်လက်ဆောင် ယူလာပေးသောအခါ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင် စကား ဆိုလိုက်မိပါသည်။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်သောအခါ ကျနော် အလွန်ဖတ်ချင် နေသော စာအုပ်လေး ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့လိုက် ရသည်။
သူမသွားမီတွေ့ခဲ့ကြစဉ် သူက ‘ဘာမှာဦးမလဲ’ ဟုမေးမြန်းရာ ရုတ်တရက်စဉ်းစားမရသဖြင့် ကျနော်နှုတ်ဆိတ် နေခဲ့သည်။ သူနဲ့ကျနော် အတူရှိနေတုန်းကတော့ ကျနော် အငမ်းမရ ဖတ်ချင်နေသော စာအုပ်အကြောင်း တမ်းတမ်းတတ ပြောဆိုမိခဲ့သည်။ ယခု သူ့ကျေးဇူးကြောင့်ပင် ထိုစာအုပ်လေး ကျနော့်ထံ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်ရှိလာပါပြီ။
Posted by +!♫♥♫*_*hack♫♥♫*_*er♫♥♫*_*+! on ဒီဇင်ဘာ 10, 2012 at 1:41am in နည်းပညာဆိုင်ရာ
မက်ဆေ့ ပို့ ရန် ဆွေးနွေးချက်များ ကို ကြည့်မယ်
ဘ၀ထဲမှာလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့ ကျွန်မတို့ အားလုံး စိတ်ဖိစီးမှုတွေဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိတတ်ကြ ပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ရံဖန်ရံခါစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုခံရတာမို့ အားလုံးအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါ တယ်။ မိမိနဲ့သင့်တော်မယ့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဖြေလျော့ကြည့်ကြပါနော်။
ဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ( ၂ ) လူ့အခွင့်အရေး၏ သမိုင်းပုံရိပ်
by Ven Pannasami on Monday, December 31, 2012 at 4:52am
ယနေ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် လှုပ်ရှားရုန်းကန်ဖြေရှင်းနေကြသော လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာသည် ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံးသော ၆ နှစ်ကြာမြင့်သည့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး၏ နောက်ပိုင်းတွင်မှပေါ်ထွက်လာသော ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်၏။ ဤလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု အရေးတော်ပုံသည် သမိုင်းကြောင်းအရကြည့်လျှင် ကာလအားဖြင့်ကြာမြင့်လှသည်မဟုတ်သေးချေ။ တိတိကျကျပြောရလျှင် လူ့အခွင့်အရေးကို ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံလာခဲ့ကြသည်မှာ ယခုစာရေးနေချိန်အထိဆိုလျှင် ၆၇ နှစ်သက်တမ်းမျှသာရှိသေး၏။ အရွယ်ရလာပြီဟုဆိုနိုင်သော်လည်း ပြီိးဆုံးအောင်မြင်စွာ အေးချမ်းမျှတသည်အထိဖြေရှင်းနိုင်သော အခြေအနေသို့မရောက်သေးကြောင်းမှာ ယနေ့ကမ့္ဘာဖြစ်ရပ်များက အထင်အရှားသက်သေပင်ဖြစ်လေ၏။
Posted by °♥•ထာဝရ ရင်ခွင်•♥° on နိုဝင်ဘာ 1, 2012 at 7:46pm in နည်းပညာဆိုင်ရာ
ဒီတစ်ခါတော့ ကွန်ပြူတာနဲ့ အမြဲတစေ ထိတွေ့ကိုင်တွယ် အသုံးပြုနေရတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် ကျန်းမာရေးအရ အသုံးတည့်မယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတစ်ခု လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေချင်ပါတယ်။
ကွန်ပြူတာကို အမြဲလိုလိုအသုံးပြုနေရသူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တာတွေက အညောင်းမိတာ၊ ခါးနာတာ၊ မျက်ရည်ပူတွေကျလာတာ စတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်. ခါးနာတာတို့ အညောင်းမိတာတို့အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် memory foam လုိ့ခေါ်တဲ့ ခေါင်းအုံးလေးတွေ၊ ကျောမှီလေးတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ပြုပြင်လို့ရပါတယ်.
by Myo Set on Friday, December 28, 2012 at 5:26pm
ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲတွင် ယခု ဓါးစားခံအသစ်များပေါ်ထွက်လာသည်။ ထိုသူတို့မှာ
(၂) ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ
ဖြစ်ကြသည်။ ဓါးစာခံများဟု ယူဆရသည်မှာ အချို့သော နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ကချင်လူမျိုးများဟု ယူဆရသော ဖေ့စ်ဘုတ်ယူဆာများက လက်ညိုးတွင်တွင်ထိုးကြ၍ ဖြစ်သည်။
ထိုသူတို့၏ စွပ်စွဲချက်များကို အကျဉ်းချုပ်ကြည့်လျှင်
(၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကို လက်ပိုက်ကြည့်နေသည်။
(၂) ၈၈ တို့သည်လဲ ထိုနည်းလည်းကောင်း
(၃)မယောင်ရာဆီလူး ပွဲတော်များကိုသာ ခင်းကျင်းပြသနေကြသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
Mails From Freinds
ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာ အောင်မြင်ခြင်းရဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ IBM က Tom Watson Sr. က "အောင်မြင်ချင်ရင် နှစ်ဆလောက် ဆုံးရှုံးတာခံရမယ်" လို့ပြောဖူးတယ်။
သမိုင်းကိုလေ့လာရင် အောင်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့သူတွေမှာ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဆုံရှုံးခဲ့ရမှုတွေ အများ
ကြီးရှိနေခဲ့တာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ လူတွေက အောင်မြင်မှသာ သတိပြုမိတာ။
သန္တရသ ရပ်ဝန်း ( ဆုံဆည်းရာ မိသားစု စာဆိုတော်နေ့ အကြို ဂုဏ်ပြုဆောင်းပါး )
ဆုံဆည်းရာ အဖွဲ့ သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်
ဆုံဆည်းရာ မှာ စာဆိုတော်နေ့အတွက် ဂုဏ်ပြုဆောင်းပါး ရေးကြမယ်ဆိုတော့ ကျမ လက်တွန့် မိတာအမှန်ပါ။ ကျမက ၀ါသနာအရ အွန်လိုင်းမှာ ကိုယ်ခံစားမိသမျှ ဆောင်းပါးတွေ ၀တ္တုတွေ ရေးနေပေမယ့်စာရေးဆရာမဟုတ် ဘာမဟုတ်နဲ့မို့ စာဆိုတော်နေ့ဂုဏ်ပြုဆောင်းပါး-- ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကိုရှိန်ပြီး ရေးချင်တာတွေရှိပေမယ့် တော်တော်နဲ့ ရေးလို့မရပါဘူး။
Author: lubo601 | 7:05 PM | No မှတ်ချက် |
January 1, 2013 ရက် ၊ 2:43 တွင် ချမ်းငြိမ်း ရေးသားခဲ့သော ဘလော့ဖြစ်ပါသည် ။
ဟိုး....... ရှေးရှေးတုန်းကပေါ့။ ငှက်တွေရဲ့ ဘုရင်ကြီးဖြစ်တဲ့ နတ်ငှက်ဟာ ငှက်တွေ ကျင်လည်ကျက်စားတဲ့ တောတောင် အနှံ့မှာ ကြေညာချက်တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ပါသတဲ့ ခင်ဗျာ။
" ဒီနှစ် နွေဦးရောက်ရင် ငှက်အလှပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကျင်းပပေးမယ်။
အလှဆုံးငှက်ကို ငှက်တကာအလှဆုံးဆိုတဲ့ ဘွဲ့ထူးကို ပေးအပ်တော်မူမယ် "
Author: lubo601 | 6:58 PM | No မှတ်ချက် |
လည်ပင်းက ကွင်းတွေကို အသက်ရှင်နေတုန်း မချွတ်တော့ဘူးလား ???
ဒီလို လုပ်ရပ်တွေလုပ်မိရင် ချွတ်ပစ်ရပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ ....
အာဖရိက နဲ့ အာရှတိုက်ရဲ့ အချို.ဒေသတွေမှာ ... ရာစုနှစ်တွေကြာအောင်
အမျိုးသမီးတွေဟာ လည်ပင်းဆန်.ထုတ်မှုကို ပြုလုပ်ကြပါတယ် ။
Author: lubo601 | 6:54 PM | No မှတ်ချက် |
ဟိုတလောလေးက သတင်းကြီးနေတဲ့ " ဆောင်ကြာမြိုင် မှတ်တမ်း " ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မင်းတုန်းမင်းနောက်ခံ မှတ်တမ်းလို့ ထင်နေခဲ့တာ။ ခေါင်းစဉ်မှာကိုက ' မှတ်တမ်း ' ဆိုတဲ့ အရေးသားနဲ့ဆိုတော့ တကယ်ပဲ မှတ်သားရတော့မယ်ထင်ခဲ့တာ။ ဖတ်ကြည့်တော့မှ မောင်မှိုင်း ဖြစ်နေတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ (အပိုင်း -၁)
Author: lubo601 | 6:36 PM | No မှတ်ချက် |
အခန်း( ၁ )
ဇာတိမြေလတ် ဟု ခေါ်သော ဗမာပြည်၏ အပူပိုင်းဇုန် ဖြစ်သော မကွေးစီရင်စု၊ ယခု ရေနံချောင်း ခရိုင်အတွင်း ပျဉ်းမနား၊ ကျောက်ပန်းတောင်း ရထားလမ်း တစ်ဝက်ခန့် တွင် အပူပိုင်း ဇုန်ကုန်းမြေပြင်များ ဖြစ်သော နှမ်း၊ပဲနှင့် ၎င်းဆီများ ထွက်၍ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် အတော် တွင်ကျယ်သော မြို့ကလေး တစ်မြို့ ရှိလေသည်။
Author: lubo601 | 1:10 PM | No မှတ်ချက် |
by Shwe Eaim Si on Monday, December 31, 2012 at 6:31am
hands with numbers shows year 2013 hands with color numbers shows future year 2013
နှစ်သစ်မင်္ဂလာမှာ.....လူသစ် စိတ်သစ်အတွေးသစ်များနဲ့ ..နေထိုင်ကြရအောင်
၁။ မည်သူ့ အပေါ်တွင်မဆို အရင်းအဖျား မခွဲခြားဘဲ စိတ်ကောင်း၊ နှလုံးကောင်းထားပါ။
၂။ ကောင်းသော ဣဋ္ဌာရုံနှင့် တွေ့သောအခါ လွန်စွာ ဝမ်းသာအားရ သောမနဿ လောဘမဖြစ်ပါနှင့်။
၃။ မကောင်းသော အနိဋ္ဌာရုံနှင့် တွေ့သော အခါ၌လည်း ဝမ်းနည်းပက်လက် မနှစ်သက်သော ဒေါမနဿ ဒေါသမဖြစ်ပါနှင့်။
Author: lubo601 | 1:06 PM | No မှတ်ချက် |
မြ၀တီ shared Royal Hero Media's photo.
ဘီလူးစီးတယ် ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် မကြုံဖူးရင်တောင် လူတိုင်းကြားတော့ ကြားဖူးလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ လူကနိုးနေရက်နဲ့ ခြေတွေလက်တွေလှုပ်မရ၊ အော်မရ ပာစ်မရနဲ့ အတော်ကြီးကို စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ အချိန်ပါ။ အင်္ဂလိပ် လို Sleep Paralysis လို့ခေါ်ပြီး မြန်မာလို ဘီလူးစီးတယ်လို့ ခေါ်တဲ့ အခြေ အနေ တစ်ရပ်ကို တစ်ခါလောက် ကြုံဖူးသွားတာနဲ့ နောက်ထပ် ကြုံဖို့ လန့်သွား လောက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ တစ်ရပ်ပါ။
‎"လစ်ဘရယ်ဝါဒ (Liberalism) နှင့် လစ်ဘရယ်သမိုင်းကြောင်း (အပိုင်း-၄)"
Author: lubo601 | 1:00 PM | No မှတ်ချက် |
၁၈၈၀ ပြည့်နှစ်လွန်များတွင် အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေးခေါ်ပညာရှင်
သောမတ်စ်ဟေးလ်ဂရင်း (Thomas Hill Green)က ဂန္ထ၀င်
လစ်ဘရယ်ဝါဒီများယုံကြည်သော စီးပွားရေးတွင် အစိုးရ
ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ကန့်သတ်ရေးသဘောတရားကို ပြန်
လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ မော်ဒန်လစ်ဘရယ်တို့က စီးပွားရေး
ကဏ္ဍတွင် အစိုးရ၀င်ရောက်ပေးခြင်းဖြင့် လူမှုရေးမျှတမှုကို
Author: lubo601 | 12:32 PM | No မှတ်ချက် |
by ဒေါက်တာလွှမ်းမိုးဟန်(Dr Hlwan Moe Han) on Monday, December 31, 2012 at 12:39am ·
သည်ကနေ့ သက္ကရာဇ် ၂၀၁၂ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ ၃၁ရက်နေ့မှာ မနက်စောစော ဆေးရုံကိုထွက်လာတော့ မီးရထားပေါ်မှာ ဖေ့ဘုတ်ကို ဖွင့်ကြည့်မိပါတယ်။ စမြင်လိုက်တဲ့ ပုံက အတော့်ကို ကျက်သရေမရှိ၊ စိတ်ပျက်ဖွယ် ပုံဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကို ၀ိုင်းပြီး နင်းခြေနေကြတဲ့ ခြေထောက်တွေကို ရိုက်ထားတဲ့ပုံ။
အများကိုယ်စားပြု ဓါတ်ရှင်ကောင်းကောင်းလေးတော့ ကြည့်ချင်တယ်။
by Ag Myint Tham on Monday, December 31, 2012 at 11:20am
လူအများစု၊ အချိန်အများဆုံး ကုန်လွန်စေသော နေရာမှာ လှုပ်ရှားမူနှင့် အသံပေါင်း စပ်ထားသော၊ တီထွင် ဖန်တီးရိုက်ကူးခြင်းတို့ကို ကြည့်ရှုနေခြင်းပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ရှေးလူကြီးများက ရုပ်ရှင်ကို ဓါတ်ရှင်ဟု ပြောသံကြားဖူးသည်။ ဘိုင်စကုတ်ဟုလည်း ခေါ်ကြသေး သည်။ ဓါတ်ရှင်၊ ဓါတ်စက်၊ ဓါတ်ပုံ၊ ဓါတ်လှေကား၊ ဓါတ်ရထား၊ ဓါတ်တိုင်၊ ဓါတ်မီး စသော စကားလုံးများအပြင် စက်ကရိယာနှင့် မဆိုင်သည်များကို ပြောဆိုကြသေးသည်။ ဓါတ်ခန်း၊ ဓါတ်စခန်း၊ ဓါတ်သွား၊ ဓါတ်ချုပ်၊ ဓါတ်ပျက်(၀မ်းပျက်၊ စိတ်ပျက်)၊ ဓါတ်စီး၊ ဓါတ်ဝင်၊ ဓါတ်ကျ၊ ဓါတ်မျှော၊ ဓါတ်သမိုင်း၊ ဓါတ်သင့်၊ ဓါတ်ရိုက်၊ ဓါတ်ဆင် စသည်တို့ကိုလည်း ထယ်လှယ်သုံးစွဲကြသေးသည်။
Author: lubo601 | 12:13 PM | No မှတ်ချက် |
ရန်ကုန် နှစ်သစ်ကူးပွဲ ပြင်ဆင်
မြန်မာနိုင်ငံက လှေစီးပြေး ၄၀၀ ကျော် မလေးရှားထိန်းသိမ်း
ပူတာအိုခရိုင်က ဆန်ပြတ်လပ်မှုပြဿနာ မဖြေရှင်းနိုင်သေး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာပါ – ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေ
မိုးနှင့် ထူးကဲမြစ်ရေကြောင့် မော်ကျွန်းစပါးစိုက်တောင်သူများ အခက်ကြုံ
တရုတ်ထုတ် ပဲပြားနှင့်ပဲချောင်းများ၌ ဓါတုဆိုးဆေးများပါဝင်နေ
နယ်ခြားစောင့်တပ်က ရေးမြို့နယ်တွင် လောင်းကစားဝိုင်းဖွင့် စီးပွားရှာ
မှောင်ခိုတားဆီးရေးအဖွဲ့ မြ၀တီတွင် ဇန်န၀ါရီ ၂၀ မှ သာ အမှန်တကယ်ဖမ်းမည်
ရေထွက်ပေါက် လျော့နည်း လာခြင်း အတွက် စိတ်ပူ နေကြသည့် ပုပ္ပါး ဒေသခံများ
ကြံခင်း မသနောစက်ရုံရှိ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားများ အမိကျောင်း တော်ကြီး၌ ပြန်လည်တွေ့ဆုံ
တရုတ်ကျေးရွာ အင်ခွန်ယန်သို့ ၁၀၅ မမ လက်နက်ကြီးကျည်ဆံ နှစ်ကြိမ်ကျရောက်
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်အား ဆေးရုံတင်ထား
Author: lubo601 | 12:49 AM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 10:54 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 8:04 PM | No မှတ်ချက် |
Posted by ကြာဖြူနွယ် on ဇူလိုင် 3, 2012 at 3:30pm
ကျမလေ ပြောရရင် --- ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖွဲ့ဝတ္တုတွေ ၊ဇာတ်လမ်းတွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ကျမ ၀တ္တုရေးရင်လည်း လွမ်းမောဖွယ်ရာ၊ ကြည်နူးဖွယ်ရာ မေတ္တာဖွဲ့ အချစ်ဝတ္တုလေးတွေ ရေးချင်ပါတယ်။တချို့ ကဒီလို အချစ်ဝတ္တု ရေးတာကို ဝေဖန် ကဲ့ရဲ့ ချင်ကြတယ်ရှင့် --
အချစ်ဝတ္တုတွေဟာ အလကားအရည်မရ၊အဖတ်မရတွေ၊ ဖတ်သူကို ဘာမှ အကျိုးမပြုဘူး-ဆိုတဲ့သူတွေကို ကျမက တစ်ခု မေးချင်ပါတယ်။
by Myanmar Journal on Sunday, December 30, 2012 at 5:35pm ·
ထာဝရအလင်းတန်း’ ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ ၈ ဆုရ
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းအဆုံး အမျိုးသမီး အကယ်ဒမီ ဆုရှင် မယ်လိုဒီ။ (ဒီဇင်ဘာလ ၃၀၊ ၂၀၁၂)။
လောလောလတ်လတ် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွက် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ပေးပွဲမှာတော့ တနှစ်လုံး အတွက် မြန်မာရုပ်ရှင်ကားကြီး ၁၅ ကား ရှိတဲ့ အထဲကနေ အကယ်ဒမီ ဆုတွေ ရွေးချယ် ပေးအပ်ခဲ့ပါပြီ။
Author: lubo601 | 7:26 PM | No မှတ်ချက် |
Posted by Thi Thi Cho on ဒီဇင်ဘာ 30, 2012 at 4:45pm
တချို့အစားအစာတွေကို ကျန်းမာရေးကောင်းစေတယ်လို့ ထင်မှတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းဆည်းပြီး စားသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့အစာတွေဟာ သင်ထင်သလိုမဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောက်ပါအစားအသောက်တွေက အမြဲနေ့စဉ် စားသုံးရင် အန္တရာယ် ရှိနိုင်တာကြောင့်သင့်အိမ်ရှိ ရေခဲသေတ္တာထဲ အမြဲထည့်မထားသင့်ပါဘူး။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ထိပ်တန်းအဖြစ်အပျက်ကြီး ၁၀ ခု (အမှတ် ၂)
Author: lubo601 | 6:41 PM | No မှတ်ချက် |
by Mizzima - News in Burmese on Sunday, December 30, 2012 at 9:20am ·
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | တနင်္ဂနွေနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၁၁ မိနစ်
မဇ္ဈိမ၏ ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းတခု ဖြစ်သော M-ZINE+ က ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များ
အနက် အထူးခြားဆုံးအဖြစ် အပျက်ကြီး ၁၀ ခုကို အယ်ဒီတာ့စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
ယင်းတို့အနက် အမှတ် ၁ဝ မှ ၃ အထိကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ယခု အမှတ် ၂ ကိုဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်ကာ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် အထူးခြားဆုံး ဖြစ်ရပ်ကြီးဖြင့် အဆုံးသတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
by မင်းလူ၏ ၀တ္တုတိုများ on Sunday, December 30, 2012 at 10:45am ·
၂၀၀၈ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘက်မှ သမ္မတလောင်းရွေးပွဲမှာ အိုဘားမားနှင့် ဟီလာရီကလင်တန်တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲဖြစ်သောကြောင့် အကြိတ်အနယ် ရှိလှ၏။ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ခေါင်းဆောင်တင်ဖုိ့ ၀န်မလေးသော်လည်း လူမည်းတစ်ယောက် အတွက်တော့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဟု လျှော့တွက်ပြီး ဟီလာရီနိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်ခဲ့မိ၏။ တကယ်တမ်းကျတော့ အိုဘားမားကို ရွေးလိုက်ကြသည်။
Author: lubo601 | 1:55 PM | No မှတ်ချက် |
by Myanmar Journal on Sunday, December 30, 2012 at 8:17am ·
လက်ပံတောင်းတောင် တလပြည့် ဆုတောင်းပွဲ
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး တောင်းဆိုနေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေနဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေကို အာဏာပိုင်တွေက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့ တလပြည့်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် သံဃာတော်များက မေတ္တာသုတ်များ ရွတ်ဖတ်ခြင်းတွေ လုပ်ခဲ့သလို ရာနဲ့ချီရှိတဲ့ ဒေသခံတွေ ကလည်း စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး အပါအ၀င် သူတို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေရဖို့
ကချင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်အား ကိုမြအေး၏ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုကို ကြိုဆိုခြင်း
Author: lubo601 | 1:47 PM | 1 Comment |
ယခုရက်ပိုင်းများအတွင်း ဦးသိန်းစိန် စစ်အစိုးရ ဆင်နွှဲလျှက်ရှိသော ကချင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်သည်
အကြမ်းတမ်းဆုံး၊ အရက်စက်ဆုံး၊ လူသားစိတ်မရှိဆုံး၏ ပြယုဂ်ဖြစ်လာသည်။ ပြင်းထန်လှသော
လက်နက်ကြီးများ၊ တိုက် လေယဉ်များ၊ မြောက်များလှစွာသော တပ်အင်အားများကိုပါသုံးပြီး မိမိထက် အဆမတန် အင်အားနည်းပါးသော ကေအိုင်အိုကို ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Author: lubo601 | 1:42 PM | No မှတ်ချက် |
by Htet Aung on Sunday, December 30, 2012 at 4:16am
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးရေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း စာမရေးဖြစ်တာ တော်တော်လေးကိုကြာသွားတဲ့အတွက် ကျွန်တော့် ရဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်များနဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို အရင်ဆုံး တောင်းပန်စကားပြောပါရစေ။ ဒီမိုကရေစီတွေ ရမယ်ဝယ်ကြဦးမလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာနဲ့ပက်သက်ပြီး နည်းဥပဒေတွေကို အရင်ဆုံး ပြုပြင်ဖို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီကိစ္စမှာတော့ သဘောထားတွေ၊ အမြင်တွေ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သူတွေ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ ဂျာနယ်စာမျက်နှာတွေမှာဆိုရင်လည်း ဆန္ဒပြတဲ့သတင်းမပါရင် ခေတ်မမီတော့ သလိုပဲ။
Author: lubo601 | 1:37 PM | No မှတ်ချက် |
လေနုအေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ၂၀၁၂
မြန်မာပြည်ရှိသမျှ အဆိုတော်တွေ အသံဝင်အောင်အော်
ခရိုနီတချို့ပါ အလံဝင်အောင် လှော်ပါမှ
Author: lubo601 | 8:27 AM | 1 Comment |
ဆရာမြင့်ဇော် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်) Download
ဆရာမောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) Download
ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင် (မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒ) Download
Author: lubo601 | 8:19 AM | No မှတ်ချက် |
ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ဆိုတာ တကယ်တော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒေါသ ထိန်းချုပ်ဖို့ အကျိုးရှိမဲ့ အကြံပြုချက်တွေတော့ ရှိပါတယ်။
တစ်ယောက် ယောက်က သင့်ကို ကားလမ်းကြောင်း ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် ဒေါသထွက်တာ ခံစားဖူး ပါသလား။ သင့်သားသမီးက သင်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း လုပ်မပေးခဲ့ရင် တွေးတွေးပြီး ဒေါသ ပေါက်ကွဲ ဖူးပါသလား။ ဒေါသဆိုတာ ပုံမှန် ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုပါပဲ။
Author: lubo601 | 8:02 AM | No မှတ်ချက် |
ကို သာ ပို and Jollyguy Zaw shared Myawady News's photo.
ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်သည်တွေရဲ့ဘေးမှာ ဟန်ပါပါနဲ့ဓါတ်ပုံရိုက် ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပြီးပြီပဲ။ မင်းတို့ တရားပါတယ် ။ ဒီစစ်သည် စစ်သားတွေရဲ့ ကျန်ရစ်သူတွေဖြေသိမ့်စရာ မရှိအောင် မင်းတို့ တရားခဲ့တယ် ။